Wed, Jun 3, 2020 at 12:25pm
९ वटै स्थानीय तहबाट सरकारी ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ शुरु
डोटी, ६ असोज । सरकारको नीतिअनुसार डोटीमा पनि ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ शुरु भएको छ । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँगैको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड काठमाडौँले देशकै ४८ औँ जिल्लाका रुपमा डोटीमा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ शुरु भएको जानकारी दिएको हो । विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम डोटी र डडेल्धुरामा लागू भएपछि ‘स्वास्थ्य बीमा..
यस्ताे आँउदै छ १ हजारकाे नयाँ नाेट, चिनियाँ कम्पनीले पायाे टेण्डर
काठमाडौं, ५ असाेज । एक हजार रूपैयाँकाे नयाँ नाेट आउने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हजार रुपैयाँको नोटमा जुम्ल्याहा हात्ती राख्ने भएको हाे। अर्थ मन्त्रालयबाट जुम्ल्याहा हात्ती राख्ने प्रस्ताव स्वीकृत भई छपाइको प्रक्रियामा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल प्रचलनमा रहेको हजारको नोटमा एउटा मात्रै हात्तीको तस्बिर अंकित छ। चितवनका जुम्ल्याहा हात्ती राम-लक्ष्मणको तस्बिर अंकित नोटको डिजाइन तयार भइसकेको छ। नयाँ नोट छपाइको..
काठमाडौं, ५ असाेज । प्रहरीले बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्व सीईओसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेकाे छ। नक्कली धितोमा ऋण दिएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पछिल्लो एक सातामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । व्युरोका एसपी बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन सीईओ अजय श्रेष्ठसहित ११ जना नक्कली धितोमा ऋण प्रवाह गरेको र कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । तत्कालीन समयमा श्रेष्ठ बैंकको..
अन्तरबैंकिङ पिओएस सेवा संचालनमा, एटीएम कारोबार संचालन हुन केहि समय लाग्ने
काठमाडौँ, ३ असोज नेपाल इलेक्ट्राेनिक्स पेमेण्ट सिस्टम (नेप्स) ले जनाए अनुसार ह्याकरहरूले एटीएम ह्याक गरी पैसा निकालेपछि बन्द भएकाे अन्तरबैंकिङ पिओएस सेवा हिँजाेदेखि सञ्चानमा आएको छ । अनाधिकृत रुपमा विभिन्न बैंकहरुबाट विदेशी नागरिकहरुले रकम निकालेपछि नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स) ले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको कारोबारहरु आफ्नै एटिएम तथा पिओएस बाट मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर भाद्र ३१..
यी ठाउँमा पाइन्छन् दसैंमा सुकिला नोट साट्न
काठमाडौँ, ३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ तथा सुकिलो नोट सटही सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयबाट असोज १० गते देखि नयाँ नोट पाइने जानकारी गराएको छ । “बडा दसैं तथा पर्वमा खासगरी साना दरका नयाँ तथा सुकिलो नोटको माग उच्च हुने विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखी आगामी बडा दसैं, २०७६ को अवसरमा यस बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटार र विराटनगर,..
जनता बैंकद्वारा लमजुङको फलेनी माविका विद्यार्थीलाई ‘स्कुल ब्याग’ वितरण
लमजुङ, २ असोज । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका हिले बजारस्थित फलेनी माध्यमिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई जनता बैंकले स्कुल ब्याग वितरण गरेको छ । जिल्लाको विकट भागमा अवस्थित उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत् नर्सरीदेखि कक्षा ७ सम्मका जम्मा २ सय ६ जना विद्यार्थीलाई स्कुल ब्याग प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । ४०औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारेर विद्यालयमा अयोजित एक कार्यक्रमकाबीच दोर्दी गाउँपालिकाका..
काठमाडाैं, १ भदाै । चिनिया ह्याकरले एटिएम ह्याक गरी पैसा चोरी भएयता नेप्स स्वीच अन्तर्गतका एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा नचल्ने भएका छन्। नेप्सले केही दिनका लागि भन्दै एउटा बैंकको एटिएम कार्ड अर्को बैंकमा नचल्ने जनाएको थियो। तर १५ दिन बितिसक्दा पनि उस्तै रहेको यो समस्याले धेरै कार्डहोल्डरले सास्ती ब्यहोरिरहेका छन्। नेप्सका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले अर्को बैंकको एटिएमबाट पनि पैसा निकाल्न मिल्ने..
काठमाडाैं, १ असाेज । अब ६५ वर्ष उमेर कटेका मानिस बैंकका संचालक तथा गभर्नर बन्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संचालकको अयोग्यताका विषयमा यो उमेर हदको व्यवस्था गरिन लागेको हो। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा १ 'क'मा यो व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपी सो विधेयक..
काठमाडौं, ३१ भदौ। दशैं र तिहारका लागि राष्ट्र बैंकले असोज १० गतेबाट सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ। नयाँ नोट वितरणका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने असोज पहिलो साताबाटै नै नयाँ नोट वितरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले असोज १० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट वितरण गरिने..
काठमाडौं, ३१ भदाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पक्षबाट भने बाध्यकारी मर्जरको विपक्षमा धारणा आएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा नरहेको भन्दै भारतमा जस्तो नेपालमा बैंक मर्जर गराउन नसकिने बताए । नेपालमा बाध्यकारी मर्जर गराउन संभवसमेत नरहेको उनकाे भनाइ छ। नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको 'बैंकिङ समिट' मा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतमा किन सम्भव..
काठमाडौं, ३० भदाै । नेपाल बैंक लिमिटेडमा ठूलाे संख्यामा कर्मचारी मागेकाे छ । बैंकले ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरु पदपूर्तीको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हाे । बैंकले विभिन्न तहहरुमा विभिन्न प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै दरखास्त आह्वान गरेको हो ।सोमवारदेखि असोज १९ गते सम्म अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । अधिकृतस्तरको सहायक प्रवन्धक ६ तहमा १ सय २७ जना र सहायक प्रवन्धकमा १० जना सीए..
काठमाडौँ, २९ भदौ । तपाईंले चेकमार्फत कारोवार गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने अब तपाईंले चेक नकाटे पनि हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटिजिएस) ले तपाईंलाई चेक काट्ने तथा अन्य व्यावहारिक समस्यालाई समेत समाधान गरिदिने भएको छ । बैंकका अनुसार रु दुई लाखभन्दा बढीको भुक्तानीमा चेक काट्नु नपर्ने भएको हो । यस्तै..
काठमाडौं, २९ भदौ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम २० बर्षसम्म कारोबार नभए त्यो पैसा सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ । संसदमा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने ब्यस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि २० बर्षसम्म कसैले पैसा झिक्न नआए त्यस्तो पैसा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्ने..
काठमाडाैं, २७ भदाै । बैंकहरूको एटिएम प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एटिएमबाट पैसा नआए सिधै सम्बन्धित बैंकलाई नै सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । भदौ १४ गते चिनियाँ ह्याकरले नेपालको एटिएम प्रणाली ह्याक गरेर पैसा चोरेपछि नेप्स स्वीचमा आवद्ध विभिन्न १८ बैंकको एटिएम प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ । नेपालमा भिसा नेटवर्कअन्तर्गत नेप्स, नविल, एनएसबिआईलगायत स्वीच कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।..
वालिङ, २७ भदौ नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्याङ्जामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गत फागुनदेखि शुरुआत भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा (छ महीनाको अवधिमा) हालसम्म स्याङ्जामा ३४ हजार ४०० आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्याङ्जाका दर्ता सहयोगी ध्रुव हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत फागुनबाट शुरु भएको दर्ता कार्य पहिलो चरणमा जेठसम्म १६ हजार र दोस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्ममा १८ हजार..
काठमाडौँ, २६ भदौ सरकारले रु ११ अर्ब ५० करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । ‘फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सलाईजेशन कार्यक्रम’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड र ‘रुरल इन्टरप्राइज फाइनान्सिङ परियोजना’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका सम्बन्धमा..
काठमाडौं, २६ भदाै । नेपाली रूपैया २० र ५० का नयाँ नाेट प्रचलनमा आएका छन् । बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले रुपैयाँ २० र रुपैयाँ ५० दरको नयाँ सिरिजको नोट प्रचलनमा ल्याएको हाे। राष्ट्र बैंकले बिहीबारदेखि २० रुपैयाँ दरका अग्रभागमा ‘विसं २०७२’ र पृष्ठभागमा ‘२०१६ एडी’ लेखिएका संकेत नंम्बर ञ/४१ ०००००१ देखि ञ/४१ ९९९९९९ सम्मका नोट निस्कासित गरेको हो। त्यसैगरी ५० रुपैयाँ दरका अग्रभागमा ‘विसं २०७२‘ तथा..
काठमाडौं, २६ भदाै । अब बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर र कर्मचारीले पनि प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने भएकाे छ । एक व्यक्ति एक प्यान नम्वर अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति अनुरुप बीमा गराउने अभिकर्ताले पनि स्थायी लेखा नम्वर 'प्यान' नम्वर लिनु पर्ने भएको हाे । बीमा समितिले गत आइतवार बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै बीमा क्षेत्रमा काम गर्ने बीमा अभिकर्ता, बीमा कम्पनीका सर्भेयर र कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा..
डोटी, २५ भदौ जिल्लाको शिखर नगरपालिका–५, धामीगाउँकी २५ वर्षीया ईश्वरी विकका श्रीमान् खेमराज विक रोजगारीका लागि भारतको मुम्बई जानुभएको छ । ईश्वरीको बिहे ११ वर्षपहिले १४ वर्षकै उमेरमा भएको थियो । रोजगारीका लागि भारतमा रहेका खेमराज विकले विगतमा आफूले कमाएको पैसा घर पठाउँदा कुनै व्यक्तिसँग पठाउने गर्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ आफू घर आउँदा उहाँले आफँै पनि बोकेर आउने गर्नुहुन्थ्यो । दुःख गरी कमाएको..
काठमाडौं, २५ भदौ । राष्ट्र बैंकले सम्भावित साइबर हमलासँग जुध्नसक्ने गरी सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा जोखिम घटाउन तथा व्यवस्थापन गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ। बैंकले आफ्नो वेवसाइट, मोबाइल एप, आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा सम्भावित..
काठमाडौं, २३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी बिलको अनलाईन बोलकबोल समोबार दिउँसो तीन बजे हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्बको ट्रजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार तीन भिन्न किसिमका २० अर्बको ट्रेजरी बिक्री गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार ९१ दिनको लागि जारी हुन लागेका ८ अर्बको ट्रेजरी बिल २०७६ असोज २८ गते, १८२ दिनको..
काठमाडौँ, २२ भदौ नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार ४ अर्ब २६ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आज एक सूचनामार्फत सोमबार बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार रु दुई अर्ब २६ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल ९१ दिने अवधिका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । सो बिल आगामी मङ्सिर २४..
पाल्पा, २० भदौ रम्भा गाउँपालिकाले दुर्घटनापछिकोे सम्भाव्य जोखिम कम गर्न बालबालिकाको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यायल क्षेत्रमा र विद्यालय आवतजावतका क्रममा बालबालिका दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ । पहाडी भेगका विद्यालयमा बालबालिका पैदलयात्रा गरी अध्ययन गर्न जानुपर्ने बाध्यताका कारण दुर्घटना बढ्दो क्रममा रहेको हो । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएपछि बालबालिकाले सहजरूपमा उपचार पाउनका लागि बीमा कार्यक्रम सफल..
काठमाडौं, १९ भदौ । एटीएम ह्याक गर्ने चिनियाँ टोलीले १३ वटा बैंकका एटीएम बुथबाट तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ लुटेको राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले ठहर गरेको छ। समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो बताएको हो। तर, कसरी रकम लुटियो भन्ने बारेमा भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। समितिले कुन बैंकबाट कति रकम लुटियो भन्ने विवरण भने बुझाएको छ। तर..
भजनी, १८ भदौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सिक्का पैसा लिन छाडेपछि व्यापारी तथा स्थानीयहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चलनचल्तीमा ल्याइएको सिक्का पैसाको अस्तित्व हराउँदै जाने सम्भावना देखिन थालेको छ ।नेपालमा पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि उत्पादन गर्दै आएको सिक्का पैसाको अस्तित्व हराउँदै जाने अवस्था देखिएको हो । उत्पादन गरेका सिक्का पैसा बैंक तथा वित्तीय..
काठमाडौं, १८ भदौ । दसैंंतिहारजस्ता चार्डपर्वको समय नजिकिँदै छ। वर्षभरिमा सबैभन्दा लामो बिदा यही समयमा हुन्छ। यही समय साइबर हमलाका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ। संसारभर नै ह्याकरले लामो बिदाको समयलाई साइबर हमलामा उपयोग गर्ने प्रबृत्ती छ। चार्डपर्वका बेलामा ठूलो पैसा बजारमा प्रवाह हुने भएकाले यस्तो समय ह्याकरले पैसा लुट्ने सुनौलो मौका पाउँछन्। अहिले तीजको मुखमा ह्याकरले पैसा लुटेका छन्। चिनियाँले एटीएमबाट पैसा..
काठमाडौँ, १७ भदौ नेपाल राष्ट्र बैंकले रु एक अर्ब ५८ करोड बराबरको रकम एक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपमा राख्ने भएको छ । बैंकले आज एक सूचनामार्फत सो कुराको जानकारी दिएको हो । बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा रु एक अर्ब २६ करोड ८६ लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा रु २३ करोड ७८ लाख र ‘ग’ वर्गका..
काठमाडौँ, १५ भदौ चिनियाँ ह्याकरले बैंकको एटिएमबाट लुटेको पैसा कुनै पनि ब्यक्तिको खाताबाट नझिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले निक्षेपकर्ताहरुको पैसा नलुटिएको जानकारी दिए । निक्षेपकर्ताहरुको पैसा नलुटिएको बताउँदै उनले बैंककै आफ्नो पैसा लुटिएको स्पष्ट पारे । उनले निक्षेपकर्ताहरुको खाता सुरक्षित भएको दावी समेत गरे । उनले भने, निक्षेपकर्ताहरुको खाता सुरक्षित छन्, चिन्ता लिनुपर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले..
काठमाडौँ, १५ भदौ शनिबार साँझ दरबारमार्ग स्थित एटिएमबाट सवा करोड रकम सिस्टम ह्याक गरेर निकालिसकेको अवस्थामा प्रहरीले पाँचजना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नागरिकको बैंक खातामा रहेको रकम नलुटिएकाले ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ । ह्याकरले एटिएमको करोडौँ रकम लुटेको खबरपछि आम नानगरिक आतंकित भएका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो आग्रह गरेको हो । ह्याकरले बैंकको एटिएममा मात्रै..
काठमाडौं, १५ भदौ । एटिएमको पिन नम्बर ह्याक गरेर ग्राहकको बैंक खाताबाट करौडौँ रुपैयाँ लुट्ने पाँच जना चिनियाँ नागरिक प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। नेपालमा रहेका एटिएम बुथको रकम लुट्ने योजना चीनबाटै बनाएर उनीहरु नेपाल आएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। नेपाली बैंकका एटीएम मेसिन ह्याकरको निशानामा परेपछि बैंकहरुले आफ्नो एटिएम सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेका छन् । प्रहरीले एटिएम ह्याक गरेर रकम निकाल्ने..
Results 520: You are at page4of 18